Madaxweyne Trump oo ku goodiyay inuu dhaqaalaha Wadanka Turkiga dhulka ku dari doono – Walaal24 Newss
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku gooddiyay “inuu dhulka ku dari doono dhaqaalaha Waddanka Turkiga” haddii uu Turkigu weeraro xoogagga Kurdiyiinta ah ee ku sugan gudaha Suuriya, kadib marka la hirgaliyo qorshaha uu Mareykanka ciidamadiisa uga saarayo Suuriya.
Hadalka Mr Trump ayaa daba socday cambaareyn hor leh oo loo jeediyay go’aankiisa ku qotoma in ciidamada Mareykanka laga saaro Suuriya.
Mas’uul heer sare ah oo ka tirsan boqortooyada Sacuudiga, oo lagu magacaabo Amiir Turki al-Faisal, ayaa BBC-da u sheegay in ka bixitaanka Ciidamada Mareykanka ay ka dhalan karto saameyn dhanka khaldan ah, isla markaana ay ka faa’iideysan karaan Iiraan, Ruushka iyo madaxweynaha Suuriya Bashar al-Asad.
Madaxweynaha ayaa difaacay go’aankiisa ku saabsan saaritaanka ciidamada, isagoo sheegay in xilli kasta dagaallameyaasha Daacish ay weerarro kala kulmi doonaan saldhigyada aan la cayimin “ee ku yaalla meelaha u dhow”.
Ma uusan faahfaahin sida ay waxyeellada u gaari doonto dhaqaalaha Turkiga, haddii uu weeraro kooxda YPG. Mr Trump ayaa sidoo kale xusay in la abuuri doono “khadka nabdoon ee 20-ka mile ah”, kaasoo wariyaha BBC-da ee lagu magacaabo Barbara Plett Usher ay sarbeebtay inuu qeyb ka yahay xal uu Mr Pompeo isku dayayo inuu wada xaajoog ku galo.
“Argagixisadu ma noqon karaan kuwo xulafo kuu ah”, ayuu yiri.
Maxakamadda Ciidanka Qalabka sida oo xukunno kala duwan ku ridday 2 askari oo dil u geysteen Askari kale
Dowladda Somaliya oo digniin Culus u dirtay Xafiiska Qaramada Midoobe ee Soomaaliya
Shir loogaga hadlayay sidii la isaga kaashan lahaa joojinta jaridda iyo dhoofinta dhuxusha
Dhageyso: Munasabada Xilwareejinta Golaha Shacabka oo ka dhacday Xarunta villa Hargeysa ee Magalada Muqdisho